Tottenham Oo NUS DARSAN Goolal Ah Ku Xasuuqday Man United, Mourinho Oo Ka Aargutay Red Devils & United Oo Rikoodh Laga Jabiyay - Gool24.Net
Tottenham Oo NUS DARSAN Goolal Ah Ku Xasuuqday Man United, Mourinho Oo Ka Aargutay Red Devils & United Oo Rikoodh Laga Jabiyay
Tottenham ayaa nus darsan goolal ah ku xasuuqday Manchester United oo 10 xiddig ku ciyaareysay muddo 60 daqiiqo ah iyadoo kooxda Jose Mourinho ay 6-1 ku xaaqeen Red Devils oo marti loogu ahaa garoonkeeda Old Trafford.
Mourinho ayaa ka aargutay kooxdii ceyrisay iyo Solskjaer oo weerarayay maalmihii la soo dhaafay iyadoo kooxdiisa ay lix gool kaga jawaab celisay gool ay ku hormartay Manchester United oo ku jirta xaaladii ugu xumeyd.
Heung-min Son iyo Harry Kane ayaa kala dhantaalay Shayaadiinta Cas Cas iyagoo min labo gool dhaliyay kulankii caawa halka Aurier iyo Tanguy Ndombele ay min gool dhaliyeen.
Man United ayaa laga jabiyay rikoodh iyadoo markii ugu horeysay abid afar gool laga dhaliyay qeybta hore ee ciyaar Premier League ah tan iyo markii horyaalka magacaas loo bixiyay sannadkii 1992.
Natiijadaan ayaa la micno ah in Red Devils ay ku jirto kaalinta 16aad iyagoo 3 dhibcood kaliya ka heysta seddex kulan oo ay ciyaareen halka Tottenham ay ku jirto kaalinta shanaad iyagoo leh 7 dhibcood afar kulan ay ciyaareen.
Tababare Solskjaer ayaa 10 bedel ku sameeyay shaxdiisii kulankii Carabao Cup iyadoo Eric Bailly kaliya uu ka haray shaxdii hore halka Van de Beek laga horjoogsaday mar kale inuu ku soo bilowdo kulankiisii ugu horeysay ee Premier League.
Tababare Mourinho ayaa isna sideed bedel ku sameeyay shaxdiisii kulankii Europa League ee ay ciyaareen habeenkii Khamiista iyadoo ay shaxdii kulankaas ay ka hareen kaliya Davinson Sanchez, Pierre-Emile Hojbjerg iyo Harry Kane oo seddexleey dhaliyay kulankaas.
30 ilbiriqsi markii ay socotay ciyaarta Man United waxaa loo dhigay rigoore markii uu Sanchez qalad ku galay Martial oo xerada ganaaxa ku jira. Garsoore Taylor ayaan ka labalabeynin inuu tilmaamo gool ku laad.
Waxaa rigoorada u soo istaagay khabiirka rigoorooyinka Bruno Fernandes kaasoo si degan u dhaliyay inkastoo uu goolhaye Hugo Lloris ka labalabeeyay inuu si fiican isagu tuuro dhankii ay kubada u socotay.
Hogaanka Manchester United ma uusan waarin iyadoo Tottenham ay heshay goolka barbaraha daqiiqadii 4aad ka dib difaacashadii ugu xumeyd ee xilli ciyaareedkan oo ay soo bandhigtay Manchester United.
Bailly, Maguire iyo Shaw ayaa intaba ku guuldareystay inay kubad sahlan iska bixiyaan iyadoo fursad u abuuray Tanguy Ndombele kaasoo ku ciqaabay qaladaadkoodii faraha badnaa ee ay sameeyeen ka hor goolkaas.
Markii ay ciyaarta socotay todoba daqiiqo waxay aheyd 2-1 oo ay Tottenham hogaanka ku heysay kuwaasoo goolkii ay Man United ku hormartay durbadiiba uga jawaab celiyay labo gool.
Mar kale goolkaan ayaa ku yimid hurdo ay iska galeen daafaca Man United iyadoo Harry Maguire oo qalad ku galay Harry Kane uu durbadiiba gadaal u soo degi waayay taasoo u saamaxday in Harry Kane uu laadka xorta ah si degdeg ah ugu baaso Heung-min Son oo kubada la dhinay maray Bailly ka hor inta uusan ka dulqaadin goolhaye De Gea oo ku soo baxay.
Daqiiqadii 20aad Man United ayaa ku dhawaatay inay ciyaarta barbareyso laakiin darbo dhulka ku socota oo ka baxday Rashford islamarkaana gool loo filayay waxaa soo celisay birta goolka.
Ka dar oo dibi dhal ayaa ka dhacday daqiiqadii 28aad markii Man United kaar cas laga siiyay weeraryahan Anthony Martial kaasoo dharbaaxay Eric Lamela xilli ay koorno isku diyaarinayeen, laakiin Martial ayaa ka carooday xusul qoorta kaga dhacay ka hor inta uusan dharbaaxada ku jawaab celinin.
Daqiiqadii 31aad ciyaarta waxay noqotay 3-1 oo ay hogaanka ku sii dheereysatay Tottenham iyadoo Spurs ay ciyaarta gabi ahaanba koontarooleysay. Son ayaa markiisa caawiye u noqday Kane isagoo kubad u celiyay xiddiga Ingariiska kaasoo isna si habsami leh shabaqa u dhex dhigay.
Lix daqiiqo ka dib Tottenham waxay ciyaarta ka dhigtay 4-1 iyadoo Aurier oo garabka midig ka soo xarooday uu kubada u dhigay Heung-min Son kaasoo isna dabamariyay goolhaye De Gea, wuxuuna ahaa goolkiisii labaad ee ciyaarta.
Waxaa qeybtii hore lagu kala nastay iyadoo Spurs ay 4-1 ku hogaamineyso ciyaarta. Man United ayaa rikoodh laga jabiyay. Waa markii ugu horeysay abid taariikhda Premier League ee afar gool laga dhaliyo qeybta hore ee ciyaar.
Xasuuqii ku socday Man United kaliya kuma ekeyn qeybtii hore, iyadoo Spurs ay dhalisay goolkii shanaad ee ciyaarta daqiiqadii 51aad. Moura iyo Hojbjerg ayaa khadka dhexe kubad ku soo dhisay iyagoo booskiisa ka bixiyay Luke Shaw taasoo u ogolaatay daafaca Aurier inuu kubada la garab maro Pogba oo uu shabaqa meel hoose ka toogto.
Tottenham ayaa buuxsatay nus darsankeeda daqiiqadii 79aad markii rigoore loo dhigay iyadoo Paul Pogba uu qalad ku galay Davies kaasoo dhulka soo seexiyay Wan-Bissaka ka hor inta uusan Pogba qaladka ku gelin. Harry Kane ayaa rigoorada u istaagay kaasoo gool u sarifay.
Ciyaarta waxay ku soo dhamaatay 6-1 oo ay Tottenham ku xasuuqday Manchester United.
Farxdyeda lamkopi shaydinta iyo liverpool saana reds lagulatartamirapa
Izhaq De Honeste Pooy
war maxa dhahday? kkkkkkkk
ma sidana Liverpool lagula tartami laraba ku laha…. kkkkkkkkkk
war Man United waa Tottenham waxa 6-1 kaga badisay ee Ceebi waa Aston Villa oo koox yar oo 7-2 Liverpool ku xasuqday. kkkkkkkkk
ismail abdalla santos says: